Haacaaluu Ajjeesuu Caalaa Hammeenyi Nafxanyaan Uummata Oromoo irratti Hojjetu Hin Jiru – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooHaacaaluu Ajjeesuu Caalaa Hammeenyi Nafxanyaan Uummata Oromoo irratti Hojjetu Hin Jiru
Damee Boruu: Fulbaana 24, 2020
Rafee ka’ee, utuu karaa deemuu, utuun hojii harkaa qabuu kan ija koo dura deemee na rakkisaa jiru ajjeechaa Haacaaluu ti. Utuu nafxanyoonni haadha koo, abbaa koo fi maatii koo ana illee dabalatee ajjeesanii waan amma kana na gubu natti hin fakkaatu. Haacaaluun nama tokko miti. Nama qoofnii(unique) Waaqayyoo umaan dandeetii, beekumsa, qaroominaa fi hogummaa badhaasee ofii warajoo godhee uumate.
Haacaaluun nama sagalee xiqqoon uummata dammaqisuu, barsiisuu, qabsoo haqaaf qopheessee bobobaasuuf kennaa guddaa qabu. Uummata isaa hirbaa raasee, dammaqsee akka mirga isaaf falmaatu nama hiriirsuu danda’u. Ergaa gabaabaan yaada mar’imaan nama waadu akka salphaatti dabrsuu nama gahaa guddaa qabu. Haacaaluun bilisummaa saba Oromoo falmachuu fi qabsoo Uummata Oromoo utubuu gahaan isaa ol aanaa dha.
Haa tahu malee Haacaaluun keennaa artistummaa waan qabuuf walleen jaalalaa afaan isaa keessaa bahu nama jaalalli maal akka tahe beekuuf gammachuu sammuu fi qabana laphee namaa kenna. Walleen jaalalaa dangaa fi sabummaa hin qabu. Kan biyya lafaa(universal) hundaa ti.Walleen Haacaaluu Diqaalota Nafxanyaa warra Afaan Oromoo beekaniif miti nama tahee kan dhalate hundaa iyyuu kan gammachiisu dha.
Haacaluu Ajjeesuun maaliif barbaachisaa tahe? Gaaffii kana haala qabatamaan deebisuuf gaafa ayyaana isaa argannee eenyuu Haacaaluu akka ajjeesee fi maaliif akka ajjeefame barre taha. Amma sana garuu waan nutti fakkaatu hubannaa keenya dubbachuu irraa hin dhaabbannu. Akka hubannaa koo yoo tahe sirna nafxanyaa bara kana mataa itti tahee kan gageessa jiru Konoonel Abiyi akkatahe falmii hin qabu. Onnee Haacaaluu fi dhiibaa Haacaaluun qabsoo Oromoo keessatti gochaa jiru Konoonel Abiyi caalaa namni hubachuu danda’u hin jiru. Dhiibaa Haacaluun akka Araati Kiiloo akka gales ni beeka.
Yoo Haacaaluun isa wajjin hin dhaabbanne yookan afaan isaa qabatee hin teenye mul’ani haadha isaa “Mootoii Torbaffaa tahuu” abjuu tahee akka hafu ni hubata. Kanaafuu Haacaaluu of itti waamee akka dorsisee fi barbaachisaa yoo tahe waan barbaadu akka isaaf guutu kitaaba isatu baase jedhamu irratti ka’ee jira. Kun utuu kanaan jiru gaaffii fi deebii OMN irratti Haacaaluun “Minilki haree yaabatee dhufee farada Oromoo fudhachuun isaa na guba” jedhe. Dabalees “Nafxanyaan, kaleesas, har’as borus diinaa” jedhe.
Jechi kun kan Haacaluu ajjeeesisu danda’u dhaa? Miti. Nama baayyeetu kan kana caalu jechaa oola. Nama meeqatu hammeenya Minilki barreessaa fi dubbataa oola. Nama kanaaf jecha ajjeefame hin aggare. Sirna nafxanyaa fi nafaxanyaa gara wagga shantamaaf abaraa jirra. Sirna nafxanyaa abaaruufis nama ajjeefame hin agarre. Ajjeechaan Haacaaluu akeekaa qaba. Akeekni isaa inni guddaan haamilee Uummata Oromoo bilisummaaf danfee o’ee ka’ee jiru bishaan diilalla itti naqanii adoomsuuf yaadame. Uummatni Oromoo rifatee akka qabsoo kana irraa dhaabbatu tilmaamee kan rawwatame.
Inni lammaffaan ajjeechaa Haacaaluun dantaa siyaasaa gonfachuuf itti yaadamee, tilmaaman kan hojjetame. Akeeka lammaffaa kana kan sirritti mul’isu eejjennaa Mootummaan Konoonel Abiyi ajjeechaa Haacaaluu wajjin wal qabsiisee fudhachaa jiru ilaaluun ni gaha. Kan ajjeefamee baayyee jaallatmaa fi kabajamaa qananii goota ilma Oromoo yoo tahu sababa ajjeechaa isaaf kan hidhamu ol aanaa hoogantoota ijaarsota Oromoo tahun baayyee kan nama dhibu dha. Hojii abarsaa fakkaata. Oromoon ilma isaa wareegameef boo’uu fi awwalachuun hafee mana hidhatti darbamee gidiraa arguun waan abjuun argan malee waan dhugaan lafa irratti raawwatamaa jiru hin fakkaatu. Kan ajjeefamus nuyi. Kan hidhamus nuyi. Gocha kana fakkaatu maal jennee dhaloota keenya boruuf himuuf teenya?
Yaadni sadaffaan tuffii Uummata Oromoof qaban irraa kan madu dha. Aangoo irratti warri Habashaa mucaa haadha isaanii iyyuu qaluu irraa of booda hin jedhan. Aadaa isaa keessatti Uummatni Oromoo aangoo irratti wal ajjeesuuf shaakala hin qabu. Aangoo kan fudhatu nama beekumsa, dandeetii fi jaalala uummata qabu malee nama karaa deemu miti. Aangoon Oromoo sirna gadan ilaa fi ilaameen wal darba malee wal ajjeechaan miti. Kana irraa kan ka’e carraan Oromoo nafxanyootan ajjeefamuu tahee hafaa jira. Of irratti ajjeessuu baruu qabna. Yoo gumaa ijoollee keenyaa hin baafnu tahe bara baraan nu boosisaa hafu. Habashaa fi Oromoon waliin jiraachuuf rakkinni keenya guddan kan maddu garaagarummaa aadaa qabnu irraa akka tahe beekuu qaba. Habashoonni dhala Oromoo yoo ajjeesan Oromoon guyya torba boo’ee isa booda galee rafa yaada jedhu qabu.
Karaa biraa humni nafxanyootaa sababa COVD-19 yaroo filmaataa dabrsanii ergaa hooggantoota ijaarsotaa Oromoo kan akka ABO fi KFO mana hidhatti naqanii booda goodaa qullaa argatanii filmaataaf of qopheessaa jiru. Waajiraan ijaarsota Oromoo bakka hundaa cufamee miseensaa fi degartoonni nni ijaarsa Oromoo manni hidhaa hanqatee yaroo mana barumsaa fi foodaa warshaa keessatti dararamaa jiran filmaata goona jechuun tuffii Uummata Oromoof qaban raga godha. Dabalanii shira xaxuu dhaan warra akka jahan gantoota ABO maallaqa guddaan bitanii Uummata Oromoo gowwomsuu fi qabsoo bilisummaa Uummata Oromoo boressuuf wixxifachuun taajabii dha.
Namni Konoonel Abiyi jedhamu kun bara EPDRF keessa ture nama hojii gaaduu fi gantuu keessatti dhiiga ilmaan Oromoon harka dhiqachaa ture. OPDO keessatti illee gahan isaa hin beekamu. Nama shiraa fi malaamaltummaan maqaa OPDOn gara aangoo dhufe akka tahe namni ni beeka. Namni ifatti sirna Wayyaaneen ofaamaa turte didee dura dhaabbachuu ture Obbo Lammaa Magrsaa ti. Maaliif aangoo akka nama Abiyi jedhamu kanaa dabrsee akka laate hin beeknu. Akkumaan ol itti kaase Oromoon aangoof aadaa gagabsu waan hin qabneef tahuun ni mala. Sana malee dhiyeenya kana Obbo Lammaan “anaa fi Abiyi kan gargar nu baasu du’a duwwaa dha” jedhee yaroo dubbatu dhageenyee jirra. Haa tahu malee Abiyi guyyaa saafaa hudduu isaa qabee akka saree gad darbuus agarre.
Kanaafuu Konoonel Abiyi nama biya bulchuuf dandeetii, beekumsaa fi hoogummaa qabu utuu hin taane nama kashlabee, sobduu fi gantuu eenyuufuu akka hin taane argaa jirra. Namni kun kan inni dubbatuu fi hojjetu yaada nama biyya ijaaruu fi guddisuu utuu taane yaada biyya diiguu fi biyya faacasu dha. Kan isaaf hin taane biyya lafaa kana irra jiraachuu hin qabu. Kan uummatni itti rakkatee, agabuu bulee horii xiqqoo walitti kuufate humna waraanaa fi poolisii saamaa fudhaa jechaa badhaadhina akkamiitu dhufaa jira jennee hubachuun rakkisaa miti. Blixiginaan ittiin nama gowwomsuu fi nama kijibuuf malee hojiin kan mulachuu danda’u miti.
Anaaf ajjeechan Haacaaluu hammeenya hammeenya hundaa caalu. Karaa koof ajjeechaa Haacaaluu booda nafxanyaa wajjin jiraachuu akka hin daneenye murteefadheen jira. Sirna nafxanyaaf arba bofaa tahee kan uummata Oromoo summiin fixaa jiru Konoonel Abiyi waan taheef namni kun aangoo isaa irraa hatattamaan darbamuu qaba. Qareen, Qeerroon walii gala Uummatni Oromoo harka wal qabatee WBO utubuudhaan Mootummaa Konoonel Abiyi kana yaroo gabaabaa keessatti of irraa gonbisuuf dirqama seenaa qabna.
Haacaaluu Hundeessaa’s assassination by the naftagna/neo-naftagna was the culmination of persistent hatred against the great Oromo people and the affirmation that the naftagna and the Oromo can never be reconciled and coexist, unless the naftagna system is fully dismantled, and mutual settlement is negotiated to recreate independent neighbouring countries in what is now empire Ethiopia.
By now, every Oromo must have understood the naftagna mentality and the cruelty and immoral philosophy that guides naftagna approaches in their relations with the Oromo as a nation. In their never changing behaviours, the naftagna are, somehow, as stagnant as lobsters. Professor Jordan Peterson identifies some interesting “behaviours of lobsters”, which make me amused every time I think of the naftagna and why they never change, despite the century they live in and the amount of modern education they receive. ” Lobsters have been around for 350 million years [and] they are still comparatively primitive. [More interestingly, they pursue dominance and the dominant remains aggressive and violent towards the defeated, and] it is winner – take – all in the lobster world. …” – Perfect analogy to understand naftagna primitive thinking and the philosophy which underpinned their world outlook.
Oromo, qeerroo and qarree: Our grandfathers, our fathers and my generation tried very hard to improve relations with the naftagna, hoping that resolution might be reached by democratizing empire Ethiopia. No, that has proved to be impossible due to the failures of the naftagna to change their backward world outlook. Consequently, they have snatched Haacaalu Hundeessaa, Tadese Biru, Nadhii Gamada, Ebissa Adugna, and many more from us, and they have continued with their mission of making the Oromo people leaderless. Since we cannot afford to feed the naftagna system with the blood of our heroes and heroines anymore, the solution, now, is only one and one. Organize yourselves very well, promote capable leadership and work hard towards achieving independent Oromia. It is nearer than ever!